Steven Gerrard Oo Ka Caawinaya Jurgen Klopp Sidii Uu Ku Garaaci Lahaa Real Madrid & Ficilka Uu Sameeyey Xilli La Isku Diyaarinayo Finalka Champions League - GOOL24.NET
Steven Gerrard Oo Ka Caawinaya Jurgen Klopp Sidii Uu Ku Garaaci Lahaa Real Madrid & Ficilka Uu Sameeyey Xilli La Isku Diyaarinayo Finalka Champions League
Jurgen Klopp ayaa garab ka helaya halyeygii Liverpool ee Steven Gerrard kulanka finalka Champions League ee Real Madrid ay waajahayaan, waxaanay Klopp iyo Gerrard yeesheen kulan ay kusii naaqishayeen ciyaartan waqti ay sharaab wada cabbayeen.
Steven Gerrard oo awoodi waayey inuu Liverpool ka caawiyo inay ku guuleysato horyaalka Premier League oo uu ka qabto Manchester City, ayaa waxa uu iska xaaridin doonaa garoonka Stade de France ee magaalada Paris ee ay ka dhacayso finalka Champions League, isaga oo isku dayaya inuu caawiyo Klopp.
Sawirro ayaa laga qaaday tababaraha Aston Villa ee Gerrard iyo Klopp oo ku wada sugan meheradda lagu magacaabo Freshfield Pub ee ku taalla Formby, halkaas oo ay ku wada qaateen waqti la rumaysan yahay inay kasii sheekaysteen sida suurtogalka ah ee ay Liverpool uga adkaan karto Real Madrid.
Ma ahayn markii koowaad ee tababare Jurgen Klopp lagu arkay Freshfield Pub tan iyo markii uu yimid Liverpool, waxaana uu sidan oo kale iskaga soo xaadiriyey sannadkii 2019 markii uu soo dhamaaday xilli ciyaareedkii 2018/19, waxaana waqtigaas la socday saaxiibbadii.
Klopp iyo Gerrard oo la ogyahay inay qaddarin badan isku hayaan ayaa la filayaa inay kala dhaxli doonaan shaqada tababarenimada Liverpool oo la rumaysan yahay in Steven Gerrard loo carbinayo inuu noqdo tababaraha Liverpool ee mustaqbalka ka beddeli doona Jurgen Klopp.
Bishii December ayaa uu Jurgen Klopp warbaahinta u sheegay, in mustaqbalka dhow ay hubaal tahay in Steven Gerrard uu noqon doono tababaraha Liverpool, waxaanu yidhi: “Steven wax wanaagsan ayuu qabanayaa. Wali aad ayuu u da’yar yahay marka loo eego inta uu tababarenimada ku jiray. Xaqiiqdiina way dhici doontaa inuu noqdo tababaraha Liverpool.”